Ungangaphumeleli Kanjani Ku-Snapchat | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 18, 2016 NgeSonto, uJanuwari 15, 2017 UChris Gomersall
Umhlaba wokumaketha ubhuza ngakho Ukufakwa kukaSnapchat kwe-IPO nokwethulwa kwe Zokungcebeleka (ngokuyisisekelo konke I-Google Glass yayingekho). Kodwa-ke kukhulunywa nje ngeSnapchat kusenabathengisi abaningi abanwaya amakhanda abo. Okwamanje, ishumi nambili, intsha futhi, uqagele, Izinkulungwane zeminyaka bahlwitha izinhliziyo zabo ezincane. Kubukeka sengathi lapho nje imikhiqizo ithola ukulengiswa kwepulatifomu entsha yedijithali, yethulwa kokunye - noma okungenani umsebenzi omusha walowo okhona.
Ake sibheke ezinye izibalo ze-Snap:
I- @ Snapchat ithola ukubukwa kwamavidiyo ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10 ngosuku futhi ikhule isuka ezigidini ezi-2 yaya ngaphezulu kokungu-12 billion ukubukwa kwamavidiyo nsuku zonke ngonyaka owodwa
Ama-60% abo bonke abasebenzisi be-smartphone basebenzisa uhlelo lokusebenza lwe- @Snapchat
Imizuzu engama-25-30 yisikhathi sokusetshenziswa esijwayelekile se-Snapchat ngosuku
Ngaphezu kwama-50% wabasebenzisi abasha bansuku zonke bangama-25 nangaphezulu
Abasebenzisi be-Facebook bathuthela endaweni yesikhulumi esisha ngobuningi
Eminyakeni eyi-5 nje, iSpapchat isikhule yaba yindawo yesithathu yezenhlalo enkulu - futhi isakhula
Ngenkathi iningi lemikhiqizo livuma ukuthi kufanele vula I-Snapchat, ikakhulukazi enikezwe izibalo zokwehla komhlathi ngemuva kokukhula nokusetshenziswa kwayo, ukuba SIPULatifomu kuhlukile kunokusebenzisa ipulatifomu. Umqondo we-Snapchat uyinhle kubathengisi, kepha kulapho kuphela lapho kugcina khona. Iqiniso elibuhlungu ukuthi abathengisi abazi ukuthi baqale kuphi uma kukhulunywa ngeSnapchat.
Ukhiye wokugwema ukwehluleka kwe-Snapchat ukungawunqamuli esigabeni sezokuxhumana jikelele, ngoba unama-nuances amaningi awenza wehluke kakhulu kune-Facebook, Twitter noma i-Instagram. Iminikelo eyinhloko kaSnapchat iyenza ihluke kuwo womathathu amapulatifomu.
Uma ama-brand ezama ukufaka i-Snapchat kumasu abo ezokuxhumana futhi abuye abeke okuqukethwe kwe-Twitter, Facebook, Youtube noma i-Instagram, azohluleka.
Nazi izindlela ezine zokuwina eSnapchat
Thumela okuqukethwe ku-Snapchat abasebenzisi abangakutholi kwenye indawo - Okuqukethwe kwe-Snapchat kufanele futhi kusho okuqukethwe okukhethekile kwe-Snapchat. Abathengi bafuna ukufinyelela kulwazi lomkhiqizo abanye abasebenzisi abangenalo. Ukugqanyiswa kokuqukethwe okuphelelwa yisikhathi futhi kusebenza kahle ngokumangazayo ngombono wedwa. Abasebenzisi abakwazi ukwaba okungasekho, okusho ukuthi okuqukethwe kukhethekile kubasebenzisi be-Snapchat. Thatha, isibonelo, kanjani IFord isebenzise iSpapchat kuphela ukumemezela i-subcompact SUV entsha nje ngesonto eledlule. Lo mkhankaso, owawubhekise kubashayeli beminyaka eyizinkulungwane, wafaka isihlabani se-Snapchat u-DJ Khaled nendawo yokupaka ekhohlisayo nje ngaseHollywood Boulevard eHollywood, eCalifornia.
Sebenzisa okuqukethwe okuphelelwa yisikhathi ukudala ukuphuthuma - Enye yezinto ezihluke kakhulu ku-Snapchat ukuphelelwa yisikhathi kokuqukethwe. Ukuvumela okuqukethwe kuphelelwe yisikhathi, noma ukunyamalala ngemuva kwesikhathi esithile, kuphambana nemizwelo yochwepheshe abaningi bezentengiso. Kungani udala okuthile ukuze kusuke? Ukuvumela okuqukethwe kuphelelwe isikhathi kukhiqiza umuzwa wokuphuthuma kubathengi. Ingukugcina "ekusebenzeni manje." Okomkhiqizo, ukuhlinzeka ngokuqukethwe okusebenza ngaphakathi kwedethi yokuphelelwa isikhathi kukhuthaza abathengi ukuthi basebenze ngokushesha futhi bahlanganyele ngokushesha.
Sebenzisa izihlungi zesikhathi esilinganiselwe ukuxhumana nabalandeli - Muva nje, imikhiqizo isiqalile ukunikela ngesikhathi esilinganiselwe noma isebenzisa izihlungi ze-Snapchat. Leli qhinga alisebenzi nje kuphela ngaphakathi komqondo wokuqukethwe ophelelwa yisikhathi we-Snapchat, liphinde livumele imikhiqizo ukuthi ixhumane nabasebenzisi ababalandelayo, kanye nabanye abalandeli bomsebenzisi. NgoSepthemba 2016, IBloomingdale yethulwe I-Snapchat geofiltered "abazingeli bezikhukhula" ukukhuthaza izintambo zokuwa. Abathengi baseBloomingdale bafune izihlungi ezifihlwe kuzo zonke izitolo zendawo ezweni lonke ukuthola imiklomelo. Umncintiswano ugijime izinsuku ezintathu kuphela - cishe i-millisecond ngokwemigomo yokukhangisa. Eminye imikhiqizo isebenzise izihlungi zesikhathi esilinganiselwe ukukhuthaza amadili noma iminikelo ekhethekile, noma ukuvele nje ucindezele ukuqwashisa ngomkhiqizo. Zonke ziyindlela ehlakaniphile yomkhiqizo wokusebenzisa i-Snapchat.
Yiba yiqiniso - Ikhasimende lanamuhla liyabona ukuthi lithengiswa ngemayela eliqhele. Bafuna ukwakha ubudlelwano nemikhiqizo abayisebenzisayo. Uma ucabanga ukukhuthaza umkhiqizo wakho nge-Snapchat, kufanele usebenzise okuningi okuqukethwe kwe-Snapchat ngangokunokwenzeka. Lokhu kuzokusiza uhlobanise nezithameli zakho eziqondiwe futhi wabelane ngokuqukethwe okubalulekile kubo. Ngenkathi abasebenzisi bakaSnapchat bevamise ukubambeka besebancane, ukukhula kwepulatifomu kufanele kube ngokwanele kubakhangisi ukuyigcina ku-radar yabo.
Uma kukhulunywa ngeSnapchat, umbuzo awuthi “kufanele thina?” Kepha “Kanjani kufanele thina? ”
Tags: eyiqinisoehlungaSnapchatizihlungi ze-snapchatzokungcebeleka
UChris Gomersall ungumsunguli ne-CEO ye UMTHOMBISO, inkampani yesoftware yokumaketha e-Atlanta, GA. Phambilini, uChris wayeyiCreative Strategist kuFacebook naku-Instagram lapho asebenzisana khona nemikhiqizo nezinhlangano ezinkulu kakhulu emhlabeni, wafaka amalungelo obunikazi, wasebenza nezazi zezenhlalo nezazi zesayensi, wakha ama-prototypes nonjiniyela, ama-bootcamp ohlelo lokuhola lokushicilela, nokuningi. Phambilini ukuhola kokudala eMoxie, ezinye izinhlaka zifaka i-Euro RSCG (DSW), Exile on Seventh (I-Agency.com), kanye nokuziqalela okwakhe.